Magacyada Musharixiinta Maanta Oo Sabti ah Jeedin Doonta Khudbadahooda – STAR FM SOMALIA
Magacyada Musharixiinta Maanta Oo Sabti ah Jeedin Doonta Khudbadahooda
Qeybtii labaad ee Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha ayaa maanta hor-tagaya Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, iyagoo khudbado ay uga hadlayaan barnaamijkooda siyaasadeed jeedin doona
Musharaxiinta maanta khudbadaha jeedin doona aya aah 8 musharax, waxaana Musharax walba uu heystaa muddo 30 daqiiqo inuu ku soo bandhigo barnaamijkiisa iyo waxqabadkiisa, hadii la doorto.
Khamiistii la soo dhaafay ayay aheyd markii Musharaxiintii u horeeyay ay jeediyeen Khudbadahooda, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Musharaxiinta kala ah, Xasan Sheekh, Shariif, Saciid Dani, Bashiir Raagge, Zakariye Xaaji, iyo Dr. Saciid Ciise.
Guddiga doorashada Madaxweynaha ayaa sheegay in maanta oo Sabti ah ay dhaceyso qeybtii labaad ee khudbad jeedinta Musharaxiinta.
1-C/naasir Cabdulle Maxamed
2-C/raxmaan C/shakuur Warsame
3-C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole)
4-C/laahi Cali Axmed (Cadow Cali Gees)
5-C/laahi Cali Xasan
6-C/laahi Ciilmooge Xirsi
7-C/qaadir Cosoble Cali
8-Cali Xaaji Warsame
Maalinta berri oo Axad ah ayaa la soo gaba gabeyn doonaa khudbadaha Musharaxiinta, iyadoo Musharaxiinta u danbeeya ay maalinta berri ay jeedin doonaan khudbadahooda.
Doorashada Madaxweynaha ayaa dhici doonta 8-da bishan oo ku beegan maalinta Arbacada ee soo socota, waxaana Musharaxiinta 24-ka ah ee isku soo sharaxay xilka Madaxweynaha laga doonayaa in wareega 1aad ka soo gudbaan 4 Musharax .
Xaruntii lagu waday in lagu qabto doorashada Madaxweynaha Somaliya oo laga bedelay